August 2020 – Page4– ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်
ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်‌တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ‌ဒေါ်နန်းသူဇာ ၀င်းသည် သံတောင်မြို့နယ်၊ ဘောဂလိမြို့အတွင်း ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် တင်ဒါအောင် ကုမ္ပဏီများမှ တည်ဆောက်ပြီး၊ တည်ဆောက်ဆဲဖြစ်သော လုပ်ငန်းများကို ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရန် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း။
ဘားအံ၊ ဩဂုတ်လ (၁၃)ရက် (၂၀၁၉ – ၂၀၂၀)ခုနှစ်၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်ထောင်စုရန်ပုံငွေ၊ ပြည်နယ်ရန်ပုံငွေများဖြင့် ကရင်ပြည်နယ် သံတောင်မြို့နယ်ဘောဂလိမြို့အတွင်း ဌာနဆိုင်ရာများနှင့်တင်ဒါအောင် ကုမ္ပဏီများမှ တည်ဆောက်ပြီး၊ တည်ဆောက်ဆဲဖြစ်သော လုပ်ငန်းများကို ဒုတိယအကြိမ် ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ‌ဒေါ်နန်းသူဇာဝင်း၊ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာစိစစ်အကြံပြုရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌဦးသန့်ဇင်အောင်နှင့် ကော်မတီဝင်များ၊ လွှတ်တော်ရုံး ဝန်ထမ်းများ (QC)အဖွဲ့များတို့မှ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရန် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံးအစည်းအဝေးခန်းမတွင် (၁၃.၈. ၂၀၂၀)ရက်နေ့၊ နံနက် (၀၈၀၀)နာရီ အချိန်၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ (13-August-2020) Thursday
Posted on August 13, 2020 August 13, 2020 Author admin	38 Views
ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်‌တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ‌ဒေါ်နန်းသူဇာ၀င်းသည် သံတောင်မြို့နယ်၊ ဘောဂလိမြို့အတွင်း ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် တင်ဒါအောင် ကုမ္ပဏီများမှ တည်ဆောက်ပြီး၊ တည်ဆောက်ဆဲ ဖြစ်သော လုပ်ငန်းများကို ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်ခြင်း။
ဘားအံ၊ ဩဂုတ်လ (၁၂)ရက် (၂၀၁၉ – ၂၀၂၀)ခုနှစ်၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်ထောင်စုရန်ပုံငွေ၊ ပြည်နယ်ရန်ပုံငွေများဖြင့် ကရင်ပြည်နယ် သံတောင်မြို့နယ်ဘောဂလိမြို့အတွင်း ဌာနဆိုင်ရာများနှင့်တင်ဒါအောင် ကုမ္ပဏီများမှ တည်ဆောက်ပြီး၊ တည်ဆောက်ဆဲဖြစ်သော လုပ်ငန်းများကို ဒုတိယအကြိမ်ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ‌ဒေါ်နန်းသူဇာဝင်း၊ လွှတ်တော်ရုံးဝန်ထမ်းများ (QC)အဖွဲ့များ၊ ဘောဂလိမြို့စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့တို့သည် သပြေညွှန့်စံပြကျေးရွာ ကျေးလက်လမ်းဦးစီးဌာနမှဦးဆောင်သော လုပ်ငန်းများကို ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ (12-August-2020) Wednesday
Posted on August 12, 2020 August 13, 2020 Author admin	38 Views
ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာစိစစ်အကြံပြုရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌဦးသန့်ဇင်အောင်နှင့် ကော်မတီဝင်များတို့သည် သံတောင်မြို့နယ်၊ ဘောဂလိမြို့အတွင်း ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် တင်ဒါအောင် ကုမ္ပဏီများမှ တည်ဆောက်ပြီး၊ တည်ဆောက်ဆဲ ဖြစ်သော လုပ်ငန်းများကို ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်ခြင်း။
ဘားအံ၊ ဩဂုတ်လ (၁၂)ရက် (၂၀၁၉ – ၂၀၂၀)ခုနှစ်၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်ထောင်စုရန်ပုံငွေ၊ ပြည်နယ်ရန်ပုံငွေများဖြင့် ကရင်ပြည်နယ် သံတောင်မြို့နယ်ဘောဂလိမြို့အတွင်း ဌာနဆိုင်ရာများနှင့်တင်ဒါအောင် ကုမ္ပဏီများမှ တည်ဆောက်ပြီး၊ တည်ဆောက်ဆဲဖြစ်သော လုပ်ငန်းများကို ဒုတိယအကြိမ်ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာစိစစ်အကြံပြုရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌဦးသန့်ဇင်အောင်နှင့် ကော်မတီဝင်များတို့သည် ဘောဂလိမြို့၊စည်ပင် သာယာရေးအဖွဲ့နှင့် ကျေးလက်လမ်းဦးစီးဌာနမှဦးဆောင်သော သပြေညွှန့်စံပြကျေးရွာ၊ မြေသား(၂) မိုင်လမ်းနှင့် ပသိချောင်းခန်းမ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ (12-August-2020) Wednesday
Posted on August 12, 2020 August 13, 2020 Author admin	28 Views
ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာကော်မတီ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း။
ဘားအံ၊ ဩဂုတ်လ (၁၂)ရက် ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာကော်မတီလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို (၁၂.၈.၂၀၂၀)ရက်နေ့ ၁၀၀၀ နာရီတွင် လွှတ်တော်ရုံး၌ Minor Meeting Room ၌ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အခမ်းအနားသို့ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးစောချစ်ခင်၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာကော် မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးစောလှမြင့်နှင့်ပြည်နယ်လွှတ်တော် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များတို့မှ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ (12-August-2020) Wednesday
Posted on August 12, 2020 August 13, 2020 Author admin	37 Views
ပုံမှန်အစည်းအဝေး ပုံမှန်အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး အမိန့်ကြော်ငြာစာများ
ဒုတိယအကြိမ် ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၅)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ကျင်းပရန်ခေါ်ယူခြင်း
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံး ကြေညာချက်အမှတ် ( ၄ / ၂၀၂၀) ၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ ဒုတိယဝါဆိုလပြည့်ကျော် ၉ ရက် (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁၂ ရက်) ဒုတိယအကြိမ်ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်(၁၅)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်ဝေး ကျင်းပရန်ခေါ်ယူခြင်း ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ၂၀၀၈ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ၁၇၄၊၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေပုဒ်မ ၃၀၊ ၂၀၁၃ခုနှစ်၊ ကရင်ပြည်နယ် လွှတ်တော်ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေ ၃၊ နည်းဥပဒေခွဲ(ခ)တို့အရ ဒုတိယအကြိမ် ကရင်ပြည်နယ် လွှတ်တော် (၁၅)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးကို ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံး၌ ၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ ဝါခေါင်လဆန်း ၁၅ ရက် (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂ ရက်)၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ နံနက် ၁၀:၀၀ နာရီ အချိန်တွင် စတင်ကျင်းပရန် ခေါ်ယူကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။ ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်
Posted on August 12, 2020 August 28, 2020 Author admin	196 Views
ဘားအံ၊ဩဂုတ်လ (၁‌၂)ရက် ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကို တင်ပြတိုင်ကြားလာသော ပြည်သူတို့၏ တိုင်ကြားစာများနှင့် ပတ်သက်၍ ကြားနာခြင်းအစည်းအဝေးအား(၁‌၂.၈.၂၀၂၀)ရက်နေ့၊ နံနက်(၁၀၀၀)နာရီအချိန်တွင် တိုင်ကြားစာကော်မတီ၏ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကော်မတီအဖွဲ့၀င်များသည် လွှတ်တော်ရေးရာကော်မတီခန်းမ၌ ပြည်သူတို့၏ တိုင်ကြားစာများနှင့် ပတ်သက်၍ ကြားနာခြင်းအစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ (12-August-2020) Wednesday
Posted on August 12, 2020 August 13, 2020 Author admin	35 Views
ဘားအံ၊ ဩဂုတ်လ (၁၁)ရက် ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကို တင်ပြတိုင်ကြားလာသော ပြည်သူတို့၏ တိုင်ကြားစာများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးအား (၁၁.၈. ၂၀၂၀)ရက်နေ့၊ နံနက် (၁၀၀၀)နာရီအချိန်တွင် တိုင်ကြားစာကော်မတီ၏ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကော်မတီအဖွဲ့၀င်များသည် လွှတ်တော်ရေးရာကော်မတီခန်းမ၌ ပြည်သူတို့တိုင်ကြားစာများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ (11-August-2020) Tuesday
Posted on August 11, 2020 August 12, 2020 Author admin	21 Views
(၂၀၁၉ – ၂၀၂၀)ခုနှစ်၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်ထောင်စု ရန်ပုံငွေ၊ ပြည်နယ် ရန်ပုံငွေများဖြင့် ကရင်ပြည်နယ် သံတောင်ကြီးမြို့နယ်အတွင်း ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် တင်ဒါအောင် ကုမ္ပဏီများမှ တည်ဆောက်ပြီး၊ တည်ဆောက်ဆဲ ဖြစ်သော လုပ်ငန်းများကို လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း။
ဘားအံ၊ ဩဂုတ်လ (၁၁)ရက် (၂၀၁၉ – ၂၀၂၀)ခုနှစ်၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်ထောင်စုရန်ပုံငွေ၊ ပြည်နယ်ရန်ပုံငွေများဖြင့် ကရင်ပြည်နယ် သံတောင်ကြီးမြို့နယ်၊ (၁၃)မိုင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ ဌာနဆိုင်ရာများနှင့်တင်ဒါအောင် ကုမ္ပဏီများမှ တည်ဆောက်ပြီး၊ တည်ဆောက်ဆဲဖြစ်သော လုပ်ငန်းများကို ဒုတိယအကြိမ်ကရင်ပြည်နယ် လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ‌ဒေါ်နန်းသူဇာဝင်း၊ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာစိစစ်အကြံပြုရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌဦးသန့်ဇင်အောင်နှင့် ကော်မတီဝင်များ၊ လွှတ်တော်ရုံးဝန်ထမ်းအဖွဲ့များမှ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရန် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို (၁၁.၈.၂၀၂၀)ရက်နေ့၊ နံနက် (၀၈၀၀)နာရီ အချိန်၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ (11-August-2020) Tuesday
Posted on August 11, 2020 Author admin	25 Views
ဘားအံ၊ ဩဂုတ်လ (၁၀)ရက် ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကို တင်ပြတိုင်ကြားလာသော ပြည်သူတို့၏ တိုင်ကြားစာများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးအား (၁၀.၈. ၂၀၂၀)ရက်နေ့၊ နံနက် (၁၀၀၀)နာရီအချိန်တွင် တိုင်ကြားစာကော်မတီ၏ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကော်မတီအဖွဲ့၀င်များသည် လွှတ်တော်ရေးရာကော်မတီခန်းမ၌ ပြည်သူတို့တိုင်ကြားစာများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ (10-August-2020) Monday
Posted on August 10, 2020 August 11, 2020 Author admin	14 Views
ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌဦးစောချစ်ခင်သည် လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်၊ ပိုင်ကျုံမြို့၊ နောင်ဘိုကြီးကျေးရွာ အုပ်စုနှင့် ရွာကိုင်းကောင်းကျေးရွာအုပ်စုများရှိ ကျေးရွာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲရုံးများတွင် မဲစာရင်းများ ကြော်ငြာထားရှိမှုများအား သွားရောက်ကြည့်ရှု့ခဲ့ခြင်း။
ဘားအံ၊ ဩဂုတ်လ (၉)ရက် ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌဦးစောချစ်ခင်သည် (၉.၈.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်၊ ပိုင်ကျုံမြို့၊ နောင်ဘိုကြီးကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ရွာကိုင်းကောင်းကျေး ရွာအုပ်စုများရှိ ကျေးရွာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲရုံးများတွင် မဲစာရင်းများ ကြော်ငြာထားရှိမှုများအား သွားရောက်ကြည့်ရှု့ခဲ့ပါသည်။ (9-August-2020) Sunday
Posted on August 9, 2020 August 10, 2020 Author admin	36 Views